२६, पौष, चितवन ।
चितवनको एक मात्र सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सा विज्ञानको एमडी र एमएस बिषयमा पढाइ हुने भएको छ ।
भरतपुर अस्पताल र चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) वीच चिकित्सा शास्त्रको डिग्री अफ मेडिसिन (एमडी) र मेडिकल सर्जरी (एमएस) बिभागको पढाई सञ्चालन गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेम्सका तर्फवाट डिन डा.यहुनचन्द्र शिवाकोटी तथा भरतपुर अस्पतालको तर्फवाट अस्पताल सञ्चालक समितीका अध्यक्ष विजय सुवेदी र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. केशवराज भुर्तेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सो अवसरमा नेम्सका उपकुलपपति प्रा डा. गणेशमान गुरुड्ड, रेक्टर रंगबहादुर वस्नेत सहित भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको सहभागीता रहेको थियो । चिकित्सा बिज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठानको बिस्तारीत शैक्षिक कार्यक्रम यसै बर्षको जुलाई सेसनबाट शुरु गर्ने गरि शनिवार भरतपुर अस्पताल र नेम्सका वीचमा सम्झौता भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.केशवराज भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । ४ बर्षका लागि गरिएको सम्झौता अनुसार बिभिन्न विभागमा गरि झण्डै २४ जना विधार्थीहरुले भरतपुर अस्पतालमा एमडी र एमएसको शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न पाउने छन् । चिकित्साशास्त्रका विधार्थीहरुलाई भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले प्रयोगात्मक सहित शैक्षिक पठनपाठन गराउने छन् । भरतपुर अस्पतालमा आवासिय रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले ३ बर्षे कोर्षका लागि २५ लाख रुपैया तिरेर एमडी र एमएस अध्ययन गर्न पाउने छन् । “यो अयन्त्रको भन्दा निकै सस्तो रकम हो, वाहिरका मेडिकल अस्पतालहरुले ६०÷७० लाखसम्म लिएर पढाउने गरेका छन्,” भरतपुर अस्पतालका डा. भुर्तेलले भन्नुभयो, “यसले भरतपुर अस्पतालको सेवा थप गुणस्तरीय र नियमित वन्ने छ ।” नेम्सले भरतपुर अस्पतालका लागि भनेर फर्म खुलाउने, परिक्षा लिने र भर्ना गराउने काम गर्ने छ । नेम्सले भरतपुर अस्पतालमा पालैपालो विधार्थीहरु अध्ययनका लागि पठाउने छ । लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गरेर २ बर्ष ग्रामिण भेगमा सेवा गरेका चिकित्सकहरुले सरकारी कोटामा एमडी र एमएस पढन प्राथमिकता पाउने छन् भने, अन्य चिकित्सकहरुले समेत पेईड्डमा पढन पाउने छन् । “लोकसेवा पास गरेर एमडी र एमएस पढन आउने चिकित्सकहरुलाई भरतपुर अस्पतालले मासिक भुत्तानी गर्नुपदैन्” अस्पतालका मेसु डा. भुर्तेलले भन्नुभयो — “नीजि लगानीमा पढ्ने चिकित्सकहरुलाई भरतपुर अस्पतालले मेडिकल अफिसर सरह २१ हजार मासिक तलव दिनुपर्ने हुन्छ । एमडी र एमएस पढाउने भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकहरुलाई नेम्सले मासिक १८ हजार भुक्तानी गर्ने छ।” वरिष्ठ चिकित्सक र विधार्थीहरुका विचमा प्रयाप्त छलफल पछि मात्र उपचार गरिने हुदा गलत उपचारको सम्भावना नहुने दावी छ अस्पतालका मेसु डा. भुर्तेलको । भरतपुर अस्पतालले निकट भबिश्यमा नै भरतपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न लागेकोले यसले प्रयाप्त अभ्यास, ज्ञान र अनुभव समेत दिने विश्वास अस्पतालले लिएको मेसु डा भुर्तेलले वताउनुभयो । मेसु डा. भुर्तेलले भन्नुभयो, “भरतपुर अस्पतालमा एमडी र एमएसको पढाई शुरु हुने भएपछि अस्पताल बिकास समितीवाट राखिएका मेडिकल अफिसरहरु थप गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन् । ”
यसअघि भरतपुर अस्पतालको तालिम हलमा आयोजित कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका अर्थोपेडिक सर्जन डा. रुद्र मरासैनीले भरतपुर अस्पतालको समग्र अवस्थाका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने, नेम्सका तर्फवाट उपकुलपति गणेशमान गुरुड्डले नेम्सका विविध पक्षका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । भरतपुर अस्पताल सञ्चालक समितीका अध्यक्ष विजय सुवेदीका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. विजयप्रसाद पौड्ेल, भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. केशवराज भुर्तेल, नेम्सका डिन डा. यहुनचन्द्र शिवाकोटी, रेक्टर रंगबहादुर वस्नेत लगायतले वोलेका थिए । समापन समारोहमा वोल्दै अस्पतालका अध्यक्ष विजय सुवेदीले भरतपुर अस्पतालका लागि नेम्ससँगको सम्झौता ऐतिहासीक अवसरका दिन भएको भन्दै आफु निकै उत्साहित भएको वताउनुभयो । उहाँले भरतपुर अस्पताललाई नमुना अस्पतालको सवै मापदण्ड पुरा गरेर देशकै गुणस्तरीय, सहज र बिरामी मैत्रि अस्पतालका रुपमा स्थापित गराउने दावी गर्नुभयो । उहाँले अस्पतालको समग्र बिकासका लागि ५ वटा परियोजनाहरु मार्फत कार्यरम्भ गर्ने वताउनुभयो । अन्र्तक्रिया अघि चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीहरुले भरतपुर अस्पतालका बिभिन्न सेवा तथा संरचनाहरुको अवलोकन गर्दै जानकारी लिनु भएको थियो ।